अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान - नागरिक रैबार
बालुवाटारमा नबजोस् ओलीपथको बाँसुरी !
एमालेले देउवालाई विश्वासको मत नदिने
नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले क्षुद्रग्रह दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै छ । विश्वका विभिन्न देशमा सन् २०१५ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यो दिवसलाई मान्यता दिएपछि भने सन् २०१७ देखि धेरै देशले मनाउन थालेको सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताए । सोसाइटीले सन् २०१७ र २०१८ मा […]
२१ जून अर्थात् आज यो वर्षको सबैभन्दा लामो दिन हो यसको अर्थ घण्टाको हिसाबले सबैभन्दा लामो घण्टाको दिन आज हुनेछ । तपाईं यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि रात सबैभन्दा छोटो हुनेछ । यसलाई अंग्रेजीमा समर सोल्स्टिस पनि भनिन्छ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यसबारे थाहा पाउन तपाईंलाई मन लागेको हुनसक्ला । समर सोल्स्टिस के […]
करोडौँ वर्षदेखि हिउँले पुरिएको ग्रिनल्यान्डमा एउटा विशेष प्रयोजनले लगभग १५, १६ सय मिटर गहिरो खाल्डो खनिएको थियो । त्यो खाल्डो खन्ने क्रममा दिमाग रन्थन्याउने सामग्री प्राप्त भएका छन् । खाल्डोको गहिरो स्थानबाट वैज्ञानिकलाई जीवाश्मका रुपमा परिणत भएको रुख बिरुवाका हाँगा, पात प्राप्त भएका छन् । झण्डै ५५ वर्षअघि परमाणु बम लुकाउने उद्देश्यले ग्रिन ल्यान्डको हिउँमा […]
निश्चय पनि यो समाचारले नेपाललाई सुखद अनुभूति गराउँछ। कुनै बेला ‘नेपालको धन हरियो वन’ भनेर मख्ख हुने हाम्रो मानसिकतालाई आधात त्यो बेला पुग्यो जब थाहा भयो रुख धन नभएर पृथ्वीमा प्राणवायु (ऑक्सीजन ) का श्रोत हुन्। धन भएर पनि त्यस धनको मनलाग्दो प्रयोग /उपयोग गर्नमा राष्ट्रियदेखि अन्तराष्ट्रिय कानून बाधा बने। त्यस यता नेपालले जल सम्पदालाई […]